किन यस्तो ? | SouryaOnline
किन यस्तो ?
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन ९ गते ८:५३ मा प्रकाशित
कुनै पनि चाड, पर्व, जात्रा, दिवस औचित्यविहीन हु“दैनन् । ती सबैले आ–आप्mनै विशेषता र महत्व आत्मसात् गरेका हुन्छन् । धर्म, संस्कृति, परम्परा र विशेष घटनालाई सम्झन चाड, पर्व, जात्रा र दिवस, मनाउने गरिन्छ । यसलाई निरन्तरता दिनु राज्य र समाजको दायित्व हा े । यस्ता पर्व र दिवसलार्इ कनु ै एक विशष विचारल े पभ्र ाव नर्हु द“ु नै ।
सातसालमा भएका े आन्दाले नल े १०४ वर्ष े जहानियाँ राणाशासन समाप्त पा¥यो । तत्कालीन अवस्थामा यो सामान्य घटना थिएन । त्यसताका नपे ाली कागं से्र र भखर्र ै गठन भएका े नपे ाल कम्युि नस्ट पाटीर्ल े राणाशासन समाप्त पारेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अहम् भूमिका खेलेको थियो । त्यो सफल र ऐतिहासिक घटनालाई चीरकालसम्म स्मरण गर्न फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने चलन वर्तमान सरकारले भङ्ग गरेको छ । यो राम्रो लक्षण होइन ।
इतिहास, इतिहास नै हो, कसैले मेटेर मेटि“दैन । यदि कुनै विचार वा वाद बोकेकाहरूले त्यसलाई मेटाउन खोजे भने आम जनतालार्इ स्वीकार्य हद“ु नै । घटनाक्रमले विभिन्न समयमा जन्म लिएको हुन्छ । त्यस्ता कतिपय घटना ऐतिहासिक महत्वका हुन्छन् । ती सबै समाज विकासक्रमको यथार्थ चित्रण गर्न सक्षम मानिन्छन् । सात सालको क्रान्ति पनि ऐतिहासिक घटना हो । यदि २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना नभएको भए वर्तमान भोगिरहेको गणतन्त्र पनि आउने थिएन ।
यो यथार्थ कुनै एक विचार राख्न े दल वा त्यसका नते ाल े नकादर्मै ा यसका े वास्तविक महत्व घटद् नै । सबलै े स्वीकार गनर्पु र्न े यथार्थ क े हा े भन े हजरु बाबा नभए नाति हनु े थिएन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र समाजले स्थापित गरेका मान्यता हुन् । यस्ता स्थापित मान्यता भत्काउने चेष्टा गरिनु वाञ्छनीय होइन । साठी वर्ष लामो जनइतिहासलाई वर्तमान सरकारले लत्याएको छ । त्यो परिवर्तनलाई अस्वीकार गरिएको छ ।
यो राम्रो काम होइन र राम्रो सन्देश पनि गएन । वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले त्यस ऐतिहासिक क्रान्तिलाई बुर्जुवाहरूको कुनै एक समूहले गरेको विद्रोह ठान्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ । इतिहास मेट्न खोजिन्छ भने धृष्टता हुनेछ । यसर्थ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रजातन्त्र दिवस नमाउने रवैयाप्रति क्षमायाचना गर्नुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने महान् आन्दोलनलाई तुच्छ ठान्ने गल्ती मात्र होइन यो सरकारले समाज विकासको अटुट शृङ्खलालाई भत्काउनसमेत खोजेको छ । यो ऐतिहासिक गल्ती तुरुन्त सच्याइयोस् । यसले सरकारले कुभलो गर्दैन । भलै गर्छ ।
बलात्कारसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग